Nameno ny aterineto ny mpisera tamin’ny fanohanana ireo niharam-boina tamin’ny oram-batravatra tany Kerala, India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2018 6:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, polski, English
Niatrika ny tondra-drano ratsy indrindra nitranga tao anatin'ny 100 taona ny fanjakana any atsimo andrefan'i India Kerala. Efa tafakatra ho 400 ny isan'ny maty raha mbola maro kosa no miandry ny famonjena azy ireo.
Olona maherin'ny 800.000 no nafindra toerana tany amin'ny tobin'ny traboina manodidina ny 4.000 teo ho eo manerana ny distrika miisa 14. Satria mbola mitohy ny faharavana ateraky ny tondra-drano mandritra ny roa herinandro misesy dia niova ho fangatahana fanampiana, hetsika ary fanohanana ny fangataham-bavaka.
Mampiseho ny halehiben'ny faharavana ity horonantsary Youtube natambatambatra avy amin'ny TLOI Academy ity :
Maro ny traboina voafandriky ny oram-batravatra izay efa nahazo fanohanana avy amin'ny olona manerana izao tontolo izao noho ny fikambanana izay namory mpilatsaka an-tsitrapo sy mpanome fanampiana tamin'ny fananganana toerana hanangonana fanomezana tany amin'ny tanàndehibe maro, anisan'izany Mumbai, Delhi, Pune, ary Bengaluru.
Nanangana tranonkala mba ahafahan'ny mpisera manolotra fanomezana ho an'ny Tahirim-bolam-panampian'ny Lehiben'ny Minisitra ao Kerala ny sehatra toy ny PayTM sy ny Amazon.in:
Araka ny tatitra tato amin'ny Global Voices, ahafahan'ireo mpamonjy voina mitady ireo niharam-boina amin'ny alàlan'ny fanasongadinana ireo toerana mila famonjena ny rindrambaiko mpitsongo-dia Google:
Namoaka taratasy fenoina an-tserasera ho an'ireo niharam-boina mba hamantarana izay fanampiana ilainy sy ny antsipiriany momba ny toerana handefasana izany ny fikambanana sasany.
Namokatra lahatsary manazava ny fomba hanampiana ireo voafandrika sy voakasiky ny tondra-drano any Kerala ny Fifanakalozan-kevitra Buzzfeed.
Raha mbola mitombo ny isan'ny maty dia nanao ezaka ny fikambanana sy ny tsirairay mba hamonjena ihany koa ireo biby fiompy. Namoaka lahatsoratra mangataka ny olona mba hampahafantatra azy ireo ny toerana misy ireo biby izay voafandrika ao Kerala mba hahafahan'ireo ekipa mamonjy ireo biby ny Humane Society International, fikambanana mpiaro ny biby:
Nanome lakana kely ireo mpanjono ao Kerala nandritra ny hetsika famonjena. Tao anaty sioka iray, nanambara ny Biraon'ny Lehiben'ny Minisitra ao Kerala fa omena valisoa ireo mpanjono ireo, anisan'izany ny fanonerana ny fahasimbana:
Nambaran'ny governemanta Indiana fa “loza voajanahary henjana” ny tondra-drano. Raha nanohy ny fanavotana ireo olona an'arivony raikitra tao an-toerana ny governemantan'i Kerala dia efa nanomboka ny ezaka fanarenana ho an'ireo voavonjy sy ireo nafindra toerana ankehitriny ihany koa izy ireo .
Ny Talata 14 Aogositra no nahitana ny fiaramanidina ara-barotra nipetraka voalohany tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Cochin roa herinandro taorian'ny nahataran'ny sidina sy ny fanakatonana ny fifamoivoizana. Nandefa vonjimaika ny sidiny tany amin'ny seranam-piaramanidin'ny tafika ao Cochin ny orinasa-pitaterana an'habakabaka sasany.
Namela fako sy atsanga niangona nanerana ireo tetezana sy ny lalana ny fihenan'ny rano tany amin'ny faritra manodidina .
Tao amin'ny lahatsary iray nivezivezy tao amin'ny aterineto dia nilaza ny lehilahy iray nitafy fanamian'ny tafika fa hanome vaovao momba ny asa famonjena nataon'ny miaramila tany Kerala izy. Namoaka sioka ny birao foibe misahana ny fahalalaham-baovaon'ny tafika Indiana nanazava fa tsy manamboninahitra ofisialy ao amin'ny tafika ity lehilahy ity ary nanely vaovao diso ny lahatsary:
Nampikorontana ny fizotry ny fanomezana ny ahiahy momba ny fizarana kaonty nitonona ho fametrahana kaonty manokana amin'ny tahiry fanangonam-bola ho an'ny Tahirim-bolam-panampian'ny Lehiben'ny Minisitra tao Kerala. Tamin'ity raharaha ity dia nenjehin'ny polisy tao Kerala ilay lehilahy nanaparitaka ny kaontiny manokana ho an'ny olona mba handefasana vola.
Raha mbola nitohy ny asa famonjena dia namoaka fanairana mena tany amin'ny ankamaroan'ny fanjakana any Kerala ny Sampan-draharaha Indiana misahana ny Toetr'andro. Efa nitsahatra ny orana tany amin'ny faritra sasany saingy nilaza ny mpamantatra ny toetr'andro fa mbola hitohy any amin'ny distrika miisa efatra mandritra ny herinandro ny orana.